Abu Dhabi fizahan-tany dia mamoaka tetikasa vaovao tsy lavitra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Emirà Arabo Mitambatra sy Vaovao momba ny fizahan-tany » Abu Dhabi fizahan-tany dia mamoaka tetikasa vaovao tsy lavitra
Abu Dhabi fizahan-tany dia manolotra saritany misy ny lalana tsy amina làlana manarona an'i Abu Dhabi, Al Dhafrah ary Al Ain
Tetikasa vaovao manaitaitra iray natomboka androany izay hahita ireo mpitsangatsangana tsy ho ela afaka hanadihady any an'efitra mahafinaritra any Abu Dhabi. Ny Tetikasa Fampandehanana eny ivelan'ny arabe any Abu Dhabi, karakarain'ny Departemantan'ny kolotsaina sy fizahan-tany - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), dia misy sarintany enina mivezivezy eny an-dàlana izay mandrakotra an'i Abu Dhabi, Al Dhafrah ary Al Ain, izay azon'ny mpivarotra adala arahana hiditra amin'ny tobin'ny tany efitra sy ny safari desea ao anaty fiarany manokana.
Ireo sarintany misy ny zotra noforonina teo am-panombohana dia noforonina amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny traikefa amin'ny fiara, manomboka amin'ny vao manomboka ka hatramin'ny mandroso. Ny làlana tsirairay dia manome karazana fitsangatsanganana isan-karazany, ao anatin'izany ny fahitana rameva sy gazelle, ny fomba fijery ny dune tsy manam-paharoa ary ny fidirana amin'ny oases. Ny sarintany dia misy an'i Al Remah, Al Ain mankany White Sands, Hameem Loop, Umm Al Oush, Liwa Crossing ary Al Khazna, izay ho hita amin'ny alàlan'ny mpandraharaha mpizahatany mandray anjara ary koa ny Tranokala ivelan'ny lalana Abu Dhabi.
Homena andiana lisitra sy torolàlana ireo mpamily mba hiantohana ny fiarovana azy ireo. Ireo mpandraharaha mpandray anjara dia hanolotra lesona momba ny fototry ny hetsika ho an'ireo izay tsy manana traikefa mialoha amin'ny fiara tsy mataho-dalana, mba hanampiana azy ireo hankafy soa aman-tsara ny zava-niainany manaraka. Ny zotra rehetra dia haseho amin'ny fampiharana Google Maps amin'ny alàlan'ny rohy voatondro ho an'ny tsirairay.
HE Ali Hassan Al Shaiba, Tale Mpanatanteraka momba ny fizahan-tany sy ny varotra ao amin'ny DCT Abu Dhabi, dia nilaza fa: "Abu Dhabi dia toeran-kaleha mahafinaritra ho an'ireo mpitsangatsangana sy ireo mitady hifandray amin'ny natiora, noho ny tontolo samihafa sy henjana. Ny Driving Off-Road any Abu Dhabi dia hanome ny mpitsangatsangana fotoana hitrandrahana ny tontolo mahafinaritra an'i Abu Dhabi ary hiroso amin'ny hetsika mahaliana sy miovaova mandritra ny taona. Ny hetsika dia manokatra varavarana vaovao ho an'ireo mpandraharaha, izay afaka manolotra karazana traikefa an-tany efitra ho an'ny mpitsidika izao.
"Mba hamaritana ny làlana tsara indrindra hijerena sy hametrahana ireo torolàlana azo antoka amin'ny tanjona mba hiantohana ny dia mahafinaritra sy azo antoka ho an'ny rehetra, dia niara-niasa akaiky tamin'ny Capital Gate fizahan-tany sy Adventure izahay, ary koa niaraka tamin'ny Anantara Qasr Al Sarab Resort . Ny sarintany tsirairay avy dia hanome ny fepetra takiana ilaina sy torolàlana, ao anatin'izany ny haavon'ny traikefa takiana, mba hiantohana tsara ny mpamily hivoaka sy hankafy ity dia mahafinaritra ity. ”
Lufthansa dia nanangona famatsiam-bola 500 tapitrisa € tamin'ny fiaramanidina hatramin'ny Jolay 2020